ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा पास मार्क ल्याउन सकेन : डा. भट्टराई – SN-One of the news portal in Nepal
२०७५ माघ २९, मंगलवार १३:५० मा प्रकासित
डा. बाबुराम भट्टराई, संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल
नयाँ शक्ति पार्टी गत माघ १५ गतेदेखि देश दौडामा छ । गाउँगाउँमा पुगेर जनताको समस्या जानकारी लिने काम गरिरहेको नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्र्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारले गर्न नसकेका कामको चर्चा गरेर असफल भएको भनिरहँदा राम्रा काम चाँही केही पनि नगरेकै हो त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई देश दौडाहामा हुनुहुन्छ । जनताको गुनासो के छ ?
हामी माघ १५ गतेदेखि पूर्वी नेपालबाट सुरु गरेको यात्रा गोरखा आइपुगेका छाँै । हजारौँ लाखौँ जनतासँग भेट्दैछु । जनताको चाहनाअनुसार देशले तिब्र फड्को मार्न सकेको छैन । सामान्य विकास भइरहेको छ, जुन निरन्तरता मात्रै हो । अपेक्षाअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
दुई तिहाई बहुमतको सरकार त हो । तर यो सरकारबाट जनताले जति अपेक्षा गरेका थिए, त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन । जसका कारण जनता निराशा छन् ।
तपाईहरुको देश दौडाहाको लक्ष्य के हो ?
कतिपय कुरा पढेर जानिन्छ । धेरै कुरा परेर जानिन्छ । यही वर्ष म र हिसिला यमीले युरोपका ९ वटा देश घुम्यौँ । १ महिना अमेरिकाका ठूला विश्वविद्यालय पुग्यौँ । त्यसक्रममा हामीले विश्व कहाँ पुग्यो भनेर अध्ययन गर्यौँ । अहिले हामी नेपाली जनताको वास्तविक अवस्था बुझ्न देश दौडाहामा लौरी टेकेर हिँडिरहेका छौँ ।
नेपाली जनताको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
ग्रामिण भेगमा जनजाती, महिला, दलितलगायतको प्रत्यक्ष अवलोक गर्यौ । एउटा उदाहरण ः धादिङको खहरेमा कामी गाउँ रहेछ । २० घरमा २०० जना बसेका रहेछन् । उनीहरुको घर घडेरी केही पनि रहेनछ । रोजगारीको अवसर पनि छैन । यस्तो समस्या धेरै ठाउँमा छ ।
देश दौडाहाका क्रममा प्रदेश तीनको राजधानी काभ्रे बनाउनुपर्छ भन्नुभएछ । किन ?
हामी वास्तविक रुपमै संघीयतामा जाने हो भने नेपाली संस्कृति र भूगोलको ख्याल गर्नुपर्छ । बहुभाषा र बहुजातिलाई पनि संघीयताले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । जनसंख्याका आधारमा संघीयता बनाउने र राजधानी तोक्ने हो भने सफल हुँदैन । नेपालमा बहुजाति र बहुभाषाको आधारमा १० वटा प्रदेश बनाउनुपथ्र्यो । प्रदेशको नाम पनि जुन समुदायको बाहुल्यता छ सोहीअनुसार राख्नुपथ्र्यो । जस्तै गण्डकी राख्नुको साटो तमुवान राख्नुपथ्र्यो ।
तपाई देश दौडाहाका क्रममा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पुग्नुभएको छ । बुढिगण्डकी जलायशययुक्त जलविद्युत आयोजना बन्छ त ?
मेरै पालामा बुढगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गरेको हो । यो बनाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर अहिले ३० अर्ब उठिसकेको छ । यो परियोजना हामी आँफैले सात वर्षमा बनाउन सकिन्थ्यो । तर कमिसनखोरहरुले चलखेल गरेर लागेर बुढिगण्डकीलाई भकुण्डोको खेल बनाएका छन् । मुआब्जा वितरण पनि सकिएको छैन । अब यो बन्ने हो कि नबन्ने हो भन्ने चिन्ता देखिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बुढिगण्डकी बनाउन नसक्ला र ?
म कसैलाई पनि दोष दिन्न । १४ वर्ष जेल बसेर आएका साथीहरु सत्तामा हुनुहुन्छ । दशौँ युद्ध गरेर आउनुभएका साथीहरु हुनुहुन्छ । म यसले गर्यो यसले गरेन भन्दिन । म आफैँ पनि केही मात्रामा जिम्मेवार छु । तर सत्तामा पुगेपछि जसरी झिँगा गुलियोमा लटपटिन्छ, त्यसैगरी साथीहरु कमिसनमा लटपटिनुभएको छ । बुढिगण्डकी मात्रै होइन, वाइडबडी र एनसेल प्रकरणमा पनि कमिसनकै खेल छ । अरबौँका घोटाला भइरहेको छ । यस्तो भ्रष्टाचारको क्यान्सरको अन्त्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अदालत र अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यो सरकारले गरेको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विगतको जस्तै सामान्य सरकारले भन्दा अरु थप केही गर्न सकेको छैन । यो सरकार भनेको त संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचित बहुमतप्राप्त सरकार हो । एक वर्षको अवधिमा तिब्र आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको उदाहरण देखाउनुपथ्र्यो । त्यसमा चाँही चुक्यो । नयाँ युगमा नेपालको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी सरकार बन्न सकेन । त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीलाई पास मार्क दिन सक्दिन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत नायव सुब्बा बच्चुराम केसीले आात्महत्या गर्नुको रहस्य
उपचारकालागि प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जाँदै
भदौ ६ गते शुक्रबारका दिन सार्वजनिक बिदा
ओई मोटी !